AMD Van Gogh Ultra-Yakadzika Simba Ryzen Nhare APU Kuti Inyore Zen 2 CPU & RDNA 2 GPUs, Inotsigira LPDDR5 & 7.5-18W TDPs
AMD iri kugadzirira nyowani mutsara we Van Gogh yakaderera simba Ryzen nhare APUs izvo zvichanangidzirwa pachikamu chebhuku remabhuku munguva pfupi. Isu tanzwa zvishoma zvishoma zveaAPUs ayo anosanganisira akasiyana akasiyana maumbirwo achienzaniswa neCezanne APUs ari kuvhura pasi peyakajairwa U uye H akateedzana zvikamu.
AMD Van Gogh Ultra-Yakadzika Simba Ryzen APU Kuisa Zen 2 CPU & RDNA 2 GPU Architecture Mu 7.5W-18W TDP Configurations
Tinofanira kunzwa zvimwe zvinonakidza zvitsva zvine chekuita nezve Zen 3 yakavakirwa Cezanne APUs kubva kuTwitter mushandisi Patrick Schur nezuro nanhasi, akaburitsa ruzivo maererano neVan Gogh APUs mune yake yazvino tweet. Iyo AMD Van Gogh APUs ichave chikamu chemhuri yeRyzen uye vanofungidzirwa kuve chikamu chemhuri yeRenzen 5000.
FF3 BGA 7.5 - 18 watt
- Patrick Schur (@patrickschur_) August 21, 2020
Iyo tweet inotaura kuti ma AMD's Ryzen APU ayo ari chikamu chemhuri yaVan Gogh acharatidza matekinoroji maviri akakosha. Izvi zvinosanganisira Zen 2 CPU uye RDNA 2 GPU zvivakwa. Dhizaini yacho ichave isina kufanana nechinhu chakaitwa ne AMD papuratifomu yePc asi iwo maviri maumbirwo akave akaiswa kune anotevera-chizvarwa consoles kubva kuMicrosoft neSony. Iyo iripo Ryzen 4000 Renoir APU inoratidzira iyo Zen 2 CPU uye Vega GPU dhizaini apo iri kuuya yeCezanne APU mhuri ichaenda kuratidza Zen 3 CPU uye Vega Enhanced GPU mapurani.
Kunyange isu tichitoziva kugona kuzere kweiyo Zen 2 CPU dhizaini, zvingangoita kuti izvo zvinoshandisa Van Gogh APU zvinoenderana neyakagadziridzwa 7nm maitiro node. Iwe unogona kutodaidza kuti Zen 2+ iyo ichaunza kuvandudzwa kwekuita uye zvirinani zvirinani kugadzikana kwemaawa. Rutivi rweGPU kune rumwe rutivi rwunogamuchira kusimudzira kukuru muchimiro cheRDNA 2.
AMD's RDNA 2 GPUs ichaunza yakagadziridzwa mashandiro patt dhizaini pamusoro peRDNA 1. Yemukati AMD fungidziro dzakaratidza 50% kuwedzera mukuita pawatt. Hatina kumboona chero RDNA GPU iri muchiitiko mune yakasanganiswa chip dhizaini uye Van Gogh anogona kunge ariwo wekutanga kuratidza maitiro anotevera-gen Navi 2X GPUs anoita mune monolithic APU dhizaini. Tinogona kutarisira kusvetuka kukuru mukuita kwese pamusoro pe7nm Vega GPUs asi hombodo huru ichauya kubva mundangariro & cache dhizaini yeVan Gogh APUs.
Kugadzirisa nyaya dzebandwidth, mavan's Van Gogh Ryzen APU anotarisirwa kuisa memory yeLPDDR5. Iyo shanduko yeLPDDR4x ndangariro inopa inosvika makumi mashanu% nekukurumidza dhata rekuchinjisa mareti & zvakare yakakwira bandwidth iyo yaizobatsira kununura yakagadziridzwa magiraidhi kuita. Kana zviri zveTDPs, iyo Van Gogh based Ryzen APUs ichaisa masisitimu anotanga na50W uye anogona kugadzirirwa kusvika ku7.5W. Van Gogh vanogona kunge vakagadzwa kuti vabate zvese zviri zviviri Tiger Lake-Y 9W uye Tiger Lake-U 15W machipisi unozova mutambo unonakidza muchikamu chebhuku rechokwadi.
AMD Ryzen 5000 'Van Gogh' - Yakadzika-Simba Nhare APUs Ine Zen 2 CPU & Navi 21 GPU
Iko hakuna kutaurwa pamusoro pekuti machipisi aya achaburitsa riini asi mishumo yekutanga yakaratidza mukupera kwa 2020 sezuva rinogona kuburitswa asi ini ndinotarisira kuti chiziviso chizoitika pamwe chete neiyo AMD's Ryzen 5000 'Cezanne' mhuri iratidze kuCES 2021.
Iwo maVan Gogh CPUs anonziwo mune A0 kudzokorora Pakutanga kuvuza kwakaratidza kuti Van Gogh angangodaro aine Zen 2 CPU cores uye Navi GPU cores. Ipo Zen 2 yakaratidza kuve chipu chinoshanda kwazvo chechikamu chemagetsi epasi, chikamu chinonyanya kunakidza cheVan Gogh APUs chichava chipikicha chayo chisingazogadzirisike pane dhizaini yakajeka kupfuura Vega asi AMD's RDNA 2 IP . Iyo chaiyo GPU yeVan Gogh APUs inonzi Navi 21.
AMD Ryzen 5000 Van Gogh APUs inotarisirwa kuratidza Zen 2 CPU & Navi 21 GPU Cores. (Mufananidzo Credits: Igor's Lab)
Zvekare, kushandiswa kweNavi 21 codename pano kunogona kuvhiringidza vanhu vazhinji asi kungofanana neVega 20 inova iyo codename yeiyo 2nd Gen Vega (7nm) mifananidzo IP, iyo Navi 21 codename inogona kuve iripo kuratidza iyo 2nd Gen Navi ( 7nm) mifananidzo IP. Isu tinoziva izvozvo Navi 21 zvakare izita rekodhi rinoshandiswa kune Big Navi GPU asi ichi ndicho chikonzero chikonzero chandinovenga chakataurwa kare kuti ruzivo rweRenzen 5000 'Cezanne' APUs kongiri panguva ino apo mamwe ese emitsetse ari kunyanya akavakirwa pane humbowo hunofungidzirwa kubva kwakasiyana masosi.
Ndeipi inotevera-chizvarwa AMD APU mhuri yauri kutarisira zvakanyanya?
AMD Van Gogh Tsika SOCs
The post AMD Van Gogh Ultra-Yakadzika Simba Ryzen Nhare APU Kuti Inyore Zen 2 CPU & RDNA 2 GPUs, Inotsigira LPDDR5 & 7.5-18W TDPs yakatanga kutanga Wccftech.
AMD Ryzen AM5 Desktop CPUs Ine Zen 4 Architecture Yakasimbiswa Kuisa Yakabatanidzwa RDNA 2 Graphics